ဟိုမိုဒူးရပ်စ် (လူသားတို့၏အနာဂတ်သမိုင်းအကျဉ်း) – Pann Satt Lann Books
တတိယထောင်စုနှစ်ရဲ့ အရုဏ်ဦးမှာ လူသားဝါဒဟာ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ နားလည်ခြင်းဆီကို နိုးထလာနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်က လူသားတွေ ကျော်လွှားအံ့တုဖို့ မစဉ်းစားနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ အစာရေစာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းတွေ၊ ရောဂါဘယ ကပ်ဘေးဆိုးတွေနဲ့ စစ်မက်ဘေးရန်တွေကို လူသားမျိုးနွယ်သစ်က ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ့ကပ်ဘေးဒုက္ခဆိုးတွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ လူသားမျိုးနွယ်ဟာ ဘယ်ဘုရား၊ ဘယ်သူတောင်စင်ကိုမှ ဆုတောင်းနေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းဘေးတွေ၊ ရောဂါဘယဘေးတွေနဲ့ စစ်မက်ဘေးတွေကနေ ကာကွယ်ဖို့ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ ဟိုမိုဒူးရပ်စ် (နတ်ဘုရားလူသား) တွေ ကောင်းကောင်းနားလည်ထားကြပြီး လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာမှာ အများအားဖြင့် အောင်မြင်မှုတွေလည်း ရရှိထားကြပါတယ်။
လူသားတို့၏ အနာဂတ်သမိုင်း တစ်နည်းအားဖြင့် ဟိုမိုဒူးရပ် (နတ်ဘုရားလူသား) တို့၏ ရှေးရှုရာကား အဘယ်သို့နည်း? စိတ်ဝင်စားစရာ မေးခွန်း၏ အဖြေကို ကမ္ဘာကျော်စာအုပ်ဖြစ်သည့် ယခုစာအုပ်တွင် တွေးမြင်တင်ပြထားပါသည်။ မူရင်းမှာ ကမ္ဘာကျော် သမိုင်းပညာရှင် စာရေးဆရာ Yuval Noah Harari ရေးသားသည့် Homo Deus စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။
5.8 x 1.2 x 8.1 inches
မျိုးဆက်သစ်စာပေ၊ 2020 ဒီဇင်ဘာလ (ပ-ကြိမ်)
“ဟိုမိုဒူးရပ်စ် (လူသားတို့၏အနာဂတ်သမိုင်းအကျဉ်း)” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply